Haweenka Gobolka Bnaadir oo kullan duco ah u sameeyay Xamdi Maxamed Faarax [sawirro] | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Haweenka Gobolka Bnaadir oo kullan duco ah u sameeyay Xamdi Maxamed Faarax...
Haweenka Gobolka Bnaadir oo kullan duco ah u sameeyay Xamdi Maxamed Faarax [sawirro]
Kulan baroor diiq ah oo loogu duceynayay allaha u naxariistee marxuumad, Xamdi Maxamed Faarax oo dhawaan kufsi iyo dil ay u geysteen kooxo arxan laawayaal ah ayna soo qaban qaabiyeen ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Haweenka kasoo qeyb galay kulanka oo ay kamid ahaayeen,xildhibaanno,guddoomiyaha degmada Warta nabadda, aqoonyahano qeybaha kale ee bulshada ayaa watay halku dhigyo ka turjumayo qaabka ay uga xunyihiin kufsiga soo laalaabtay.
Guddoomiyaha ururka Haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac (Jawaahir Baarqab) oo ka hadashay madasha ayaa ka codsatay madaxda dalka in la horkeeno caddaaladda dadkii ka dambeeyay falka wuxuushnimada lahaa ee lagula kacay Marxuumad, Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar da’yar oo sannadkaan dhameysay dugsiga sare.
Boliiska Soomaaliya ayaa shalay sheegay in 11 eedeysane loo hayo kiiska Marxuumad Xamdi Maxamed Faarax, iyagoo tilmaamay in baaritaanku uu meel wanaagsan marayo ciddii ka dambeysay falkaasna caddaaladda la marsiin doono.
Previous articleBooliiska oo Cadaado ku qabtay nin qey ka ahaa kiiskii marxuumad Xamdi Maxamed Faarax.
Next articleGuddoomye Mursal oo la kulmay Madaxda Hirshabeelle iyo Koonfur-galbeed.